ဘလက်ချောကြီးတို့ရဲ့ နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘလက်ချောကြီးတို့ရဲ့ နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်…။
Posted by black chaw on Dec 12, 2013 in Creative Writing, Myanma News, News, Think Different | 66 comments
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်သည် တစ်ခါသုံး ပစ္စည်း သာ ဖြစ်ပါသည်…။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် မှ သင့်အား မည်သည့် ပညာ…ဗဟုသုတ…ကိုမှ ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါ…။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်သည် စာကြီးပေကြီးကြိုက်သူများကို မရည်ရွယ်ပါ…။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်သည် လူကြီးလူကောင်းကြီးများအတွက် မဟုတ်ပါ…။
စာဖတ်သူ သင့်အား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံး စေလိုခြင်းကသာ
တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်…။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲမှ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းများ၊ ဒိုင်ယာလော့ခ်များသည်…
ဂျာနယ်များတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အချက်အလက်များ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံအပ်ပါသည်…။
အခုတလော နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အသံတစ်သံကတော့…
သူလွတ်လာတော့ ကျွန်တော့်ကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးခဲ့ဖူးတယ်…။
ဆိုတဲ့ ဦးခင်ညွန့် ကြီးရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်ပါ…။
ကျေးဇူးဆိုတာ ကြံဖန်တင်တတ် ရတယ်ကွယ့် ဆိုတဲ့
ကျွန်တော့် ကြီးဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ပြောတဲ့ စကားလေး သွားသတိရမိပါတယ်…ကျောင်းဒကာ…။
အဲဒီလိုသာ ကြံဖန် ကျေးဇူးတင်ကြကြေးဆို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
စာဖတ်နေသူကြီး ဟာလည်း… (နာမည်တော့ ရေးရဲဘူး…ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးကြည့်ကြ)
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ ကြီး ဖြစ်နေပြန်ပါပေ့ါကွယ်…ဟေးဟေး…။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀ ကျော်က
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာတဲ့…
(သိတ်…စကားကြီး…စကားကျယ် ပြောတဲ့ ကောင်ဗျ…ဟေးဟေး…။)
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလ မှာမှ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့…
အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာမျိုးက ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင် ပြုပြင်သင့်တာကိုပြုပြင်…
ပြောင်းလဲသင့်တာကို ပြောင်းလဲ ရ တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်…။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့…
ပုဂ္ဂိုလ်အကျော်အမော်ကြီးတွေက အမျှော်အမြင် ကြီးစွာနဲ့
အချက် ၂ ချက်ကို ထည့်သွင်းရေးသား သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့…။
စကားကြီးစကားကျယ် ပြောနေပြီဆို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ…အာဟီး…။)
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်…၊ လွပ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့် ကို ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့
ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို ဘယ်သောအခါမှ မပြုလုပ်ရတဲ့…။
ဗိုလ်လိုတော့ ကျွန်တော်က မတော့တတ်ဘူးရယ်…။
မြန်မာလိုသာ အဆင်ပြေသလို ဖတ်လိုက်ကြပါတော့…။
ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်ကရော အဲဒီအချက်ကို ပြင်ဖို့လိုရဲ့လား ကျောင်းဒကာကြီးတို့…။
နဂိုကတည်းက လွှတ်ကို မလွှတ်သေးတာ…ဟေးဟေး…။
ပြည်သူလူထုက သေနတ်လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်…။
အဲဒီလို ပြည်သူလူထုက သေနတ်လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့
မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး ဆိုတဲ့ လူရမ်းကားကြီးတွေကို…
ခုခံကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ထင်ပါရဲ့…။
မြန်မာ ခြေ/ဥ ဆီပြန်သွားလိုက်ရအောင်…။
အခု NLD နဲ့ အမေစု တို့ ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့…
ဘယ်သောအခါမှ ပြင်ဆင်မှု မပြုလုပ်ရ ဆိုတဲ့ အချက်ထည့်ရေးသွားခဲ့ရင်…
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးပြီပေါ့ ကျောင်းဒကာတို့ရေ…။
ပြင်ဖို့ တံခါးလေး ဟပေးထားခဲ့တာကိုက…
စာဖတ်နေသူကြီးကို ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းမနေဘူးလား
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက စာဖတ်နေသူကြီးကို ကျေးဇူးတင်သင့်တယ်…။
ကျေးဇူးဆိုတာ ကြံဖန်တင်တတ်ရတယ်ကွယ့်…။ ဟေးဟေး…။
မဝေခွဲနိုင်တဲ့ သတင်းလေး တစ်ပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကွယ်…။
လစာဈေးနှုန်းလည်း သက်သာ…၊ သိမ်မွေ့ပြီး ကျိုးနွံနာခံတတ်သူတွေလည်းဖြစ်တဲ့…
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ဖေါ်အလုပ်သမတွေကို လိုချင်သူတွေ ပိုများလာပါသတဲ့ဗျာ…။
ဈေးပေါပေါနဲ့ သိမ်မွေ့ကျိုးနွံတတ် သတဲ့လား…။
သိတ် ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာအိမ်ဖေါ်တွေပဲနော်…။
၀မ်းနည်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…၊ ၀မ်းသာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…၊
လေးဖြူကီး နဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…၊
တွံတေးသိန်းတန်ကီး နဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…၊
အော်ချင်တဲ့ ကီးနဲ့ သာ အော်ကြည့်လိုက်ပါ…ကျောင်းဒကာ…။
အိမ်ဖေါ်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘားမန်း…။
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ သိတ်…သိတ်…ရေပန်းစားနေတဲ့ အချိန်အခါမျိုးကြီးမှာ…၊
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေး ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျယ်လောင်နေတဲ့ အချိန်ကြီးမှာ…၊
သက်ကြီးမုဒိန်းမှုတစ်ခု ရဲ့ သတင်းကလည်း နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် ထဲ
၀ါသနာပါရင် လမ်းမပေါ်တက် ဆန္ဒပြလို့ရတာပေါ့…။
သက်ကြီးမုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေး တို့အရေး…ဟေးဟေး…။
အသက် ၆၈ နှစ်ရှိ အဘွားအို ကိုတဲ့…၊
ကျပန်းအလုပ်သမား သက်နိုင်ဝင်း(ခ)ကုလား (၂၃) နှစ်ကတဲ့…၊
(အင်း…ဒီနာမည်မျိုး ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီးကို ကြားဖူးတယ်…။)
ဟေးဟေး…။ တော်တော် ဗရုတ်ကျတဲ့ သူငယ်…။
အံမယ်…ဒီလောက်နဲ့ တော့ သက်နိုင်ဝင်း လေးက အားမရနိုင်သေးဘူးတဲ့…။
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာဦးမည်… လို့လည်း ကြုံးဝါးသွားသေးသတဲ့…။
အဲဒါနဲ့…ဘွားဘွားက နောက်တစ်ခါ ပြန်လာမှာ ကြောက်တာနဲ့ ရဲစခန်းသွားတိုင်လို့…
သက်နိုင်ဝင်း(ခ)ကုလား တစ်ယောက် ကိစ္စများနေရသတဲ့…။
၃၇၆ နဲ့ ပဲပေါ့…။
တောင်တန်းနှင့်တူသော ၀ါဆိုမိုးဦးတင်ပါးကြီးများ အကြောင်း
အခုတလော ၀ါဆိုမိုးဦးတစ်ယောက် သူမရဲ့တင်ပါးကြီးတွေကို အသားပေးလွန်းတယ်ဆိုတဲ့…
ရွှေFM ပွဲမှာ ဂျေလို ပုံစံနဲ့ ကပြပြီး သူမရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ၀ါကြွားခဲ့သေးတယ်ဆိုလား…။
တင်ပါးလေး တစ်ဖက်ကို လှုပ်ပြလိုက်ရင် တစ်ပြုံကြီးပါလာမယ်…
အမေမွှေးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် မို့မို့မြင့်အောင်ကြီးကတော့
မျက်လုံတစ်ဖက်တည်းက မျက်ရည်ကျပြပြီး အကယ်ဒမီ ဆု တစ်ဆု ယူခဲ့သေးတယ် ဆိုပဲ…။
၀ါဆိုမိုးဦးလေးကလည်း တင်ပါးလေးတစ်ဖက်တည်းလှုပ်ပြပြီး အစ်ကိုကာလသားတွေရဲ့…
ကဗျာဆရာ ကမ်းဝေး ကတော့ ကဗျာသမားဆိုတော့ အရာရာကို…
ပြီးတော့ သူက ပြောသေးတယ်…။
၀ါဆိုမိုးဦးတင်ပါးကြီးတွေက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ အစ်ကိုရယ်
၀ါဆိုမိုးဦး သာ ဖြစ်ပလေ့စေ…။
တင်ပါးလေးတစ်ဖက်ကို အပင်ပန်းခံပြီး လှုပ်ပြနေစရာမလိုအပ်ပါဘူး…တဲ့…။
၀ါဆိုမိုးဦး တင်ပါး ဆိုတာနဲ့တင် ပွဲ ပြီးပါတယ်တဲ့…။
8 Days ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးမှာလည်း တင်ပါးကြီးတွေကို အသားပေးလို့…
ပြီးတော့ ကျတော့ ဂျာနယ်ထဲပါတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမှာလည်း တင်ပါးကြီးတွေကိုပဲ…
ဓါတ်ပုံဆရာ ကိုကို အေးဇော်မိုးရဲ့ လက်ရာတွေပေါ့…။
(ဆက်စီ ဖြစ်အောင် ရိုက်ပဲ ရိုက်တတ်လွန်းပါတယ် ကိုကိုရယ်…။)
၀ါဆို ငယ်ငယ်ကတည်းက J-Lo ကို ကြိုက်တယ်…။ ခုချိန်ထိ သူ့စတိုင်ကို ၀ါဆို ခိုက်တုန်းပဲ…။
လို့ ပြောသွားခဲ့တာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်…။
သူမက ဂျေလိုကို ကြိုက်သတဲ့…။ ဂျေလို့ စတိုင်ကို ခိုက်သတဲ့…။
ဦးဘလက်ကလည်း ဂျေလိုကို ကြိုက်တာပါပဲ…။ ဂျေလို့ စတိုင်ကို ခိုက်တာပါပဲကွယ်…။
မနေ့တစ်နေ့ကပဲ Sky Net ကလာတဲ့ သက်ဝင်ပြတိုက်ဆိုတဲ့ မြန်မာပြဇာတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်…။
တင်ပါးကြီးတွေ သိတ်လှတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦးလေးက ဂျနီဖာလိုပက်အဖြစ်
အဲဒီ ပြဇာတ်ထဲမှာ အရိုင်းနဲ့ ကျော်ထူးတို့က ပြတိုက်စောင့် အလုပ်သမားတွေ ပေါ့…။
၀ါဆိုမိုးဦးလေးက သူ့တင်ပါးကြီးတွေကို ပရိသတ်ဘက် ဘတ်ကနဲ ပစ်ပြလိုက်တဲ့အခါ…
ဒဘယ်ဘလက် ကို ရေမရောပဲ သောက်ချလိုက်သလို…
၀ါဆိုမိုးဦးလေးရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ ကလည်း မီးလောင်ရာလေပင့် ခဲ့ပြန်ပါတယ်…။
ကျမတင်ပါးကို အာမခံထားချင်ပါတယ်…။ ဒီနိုင်ငံမှာ အာမခံထားလို့ရသလား တဲ့…။
အင်း…၀ါဆိုမိုးဦးကို များ အပြင်မှာ အရှင်လတ်လတ် တွေ့ခဲ့ရင်လေ…
ခေးတင်ပါးကြီးတွေကို ဦးဘလက်ဆီမှာသာ စိတ်ချလက်ချ အပ်နှံထားလိုက်စမ်းပါ…လို့…။
အာမခံကြေးကတော့ ပိုင်ဆိုင်သမျှပေါင်နှံရောင်းချလို့ ရသမျှပေါ့ကွယ်…။
ဟယ်ရီလင်းကြီးက အချစ်နဲ့ ပေါင်မုန့်တဲ့…။
တို့ မကြီးမိုးကတော့ အချစ်နဲ့ အင်တာနာ ပဲ ကွယ်…။
မကြီးမိုး (တင်မိုးလွင်) ရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ လေးကိုလည်း…ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး…။
မမိုးမှာ အာရုံတွေများပေမယ့် အချစ်ကို အာရုံခံစားဖို့ အင်တာနာက ပါမလာဘူး…
အချစ်မှာ အင်တာနာ လိုသတဲ့လား…။
ဟိုနေ့က ကိုဆာမိ ကြီးတစ်ယောက်…
နီးဘန်း အင်တာနာကြီး တစ်ကိုင်ကိုင်နဲ့ ဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး…ဟိုး…ဟိုး…။
သဉ္ဇာဝင့်ကျော်လေး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး…။
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်မခံချင်တော့တဲ့ အတွက်…တဲ့…။
သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ဆီ ရောက်အောင်သာသွားပေတော့ အာဂ ရေ..။
အင်း…ဒီတစ်ခါ ခေတ်မီသွားအောင် ၁၈ နှစ်အောက် မဖတ်သင့်တဲ့ သတင်းလေး
HIPHOP အဆိုတော် ကန်းယေးဝက်(စ်) ရဲ့ ချစ်သူ
ကင်(မ်)ခါဒါရှန်း ဆိုတဲ့ မိန်းမက သားလေးမွေးသတဲ့…။
ယောက်ျးယူကြသော မိန်းမတိုင်း နီးပါး
အဲဒီမိန်းမက ကလေးမွေးပြီး သူ့ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါကိုတဲ့…
နဂိုပုံစံအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ရဲ့လား သိရအောင်တဲ့…
ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့…။
ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ… အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရဲ့လားဗျာ…။
သူမရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ က ဒီလိုပါ…။
ဆေးရုံက ဆင်းဆင်းချင်း အိမ်မှာ ကျမ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ ကိစ္စက
မှန်တစ်ချပ်ရှေ့ထားပြီး ကျမရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို စစ်ဆေးတာပဲ။ အဲဒါက
အရင်ထက် ကြည့်ကောင်းနေတာ တွေ့ရတယ်ရှင့်
မှန်တစ်ချပ်ရှေ့ချပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ စစ်ဆေးရေးဝင်နေရှာတဲ့
မိန်းမတစ်ယောက်ပုံကို…စိတ်ကူးထဲ ကွင်းကနဲ ကွက်ကနဲ မြင်ယောင်လိုက်မိတယ်ဗျာ…။
နန်းဆုရတီစိုး က သူမ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းက…
အဲဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာလေး အင်ဇာဂီ ရဲ့ အပြောက ဒီလိုပါဗျာ…။
နန်းဆုရတီစိုး သာ ဖြစ်လို့ကတော့…
ကောင်း…တယ်…။ (ကော်ဖီကြော်ငြာထဲက တိုင်းရင်းသူမကြီးလေသံဖြင့် ဖတ်ပါ…။)
ယောက်ျားယူတော့မယ့် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းလေးကို နံနက်ခင်းဂျာနယ်က
မေး။ ။ကဲ…၀ိုင်းစုကရော ကိုဥက္ကာကို ဘယ်လိုမြင်လဲ…။
ဖြေ။ ။သူက ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ သူ့အိမ်မှာ အားလုံးက
သူ့ကို အလျှော့ပေးရတယ်။ ၀ိုင်းစုနဲ့တွေ့တော့ သူက အလျှော့ပေးသွားရတယ်…။
အဲဒီအဖြေလေး ဖတ်ပြီးတော့ ဟိုဟာသလေး သွားသတိရမိပါတယ်…။
၀ိုင်းစုလေးအတွက် မင်္ဂလာဦး လက်ဆောင်လို့ပဲ မှတ်ပေးကြပါဗျာ…။
တစ်ခါက သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် သန်လျင် သင်္ဘောပေါ်မှာ လေညှင်းခံရင်းနဲ့
စင်ယော်လေးတွေပျံဝဲနေတာကိုကြည့်ရင်း ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို မေးပါတယ်တဲ့…။
မောင်…အဲဒီ ငှက်လေးတွေက ဘာငှက်လေးတွေလဲ…ဟင်…။
ကောင်လေးကလည်း ချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့တဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ ကောင်မလေးကို ပြန်ကြည့်ပြီး
နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး အိမ်ထောင်တွေဘာတွေကျ…။
အဲဒီမှာပဲ သန်လျင်သင်္ဘောကြီးစီးပြီး စင်ယော်လေးတွေပျံဝဲနေတာကိုကြည့်ရင်း…
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို မေးပြန်ပါသတဲ့…။
ကောင်မလေးရဲ့ လေသံက ရည်းစားဘ၀တုန်းက လေသံအတိုင်း ချို နေမြဲ ပါတဲ့…။
မောင်…အဲဒီ ငှက်ကလေးတွေက ဘာငှက်လေးတွေလဲ…ဟင်…။
ကောင်လေးက သိလျက်သားနဲ့ လာမေးနေတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ဖြေပါတယ်…။
အဲဒါနဲ့ နောက် ၃ – ၄ နှစ်လောက် ကြာတော့ ကောင်မလေးက ကလေး ၃ ယောက်ရပြီပေါ့…။
အဲဒီလိုပဲ သန်လျင်သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ စင်ယော်လေးတွေပျံဝဲနေတာကို ကြည့်ရင်း…
မောင်…အဲဒီ ငှက်ကလေး တွေက ဘာငှက်လေးတွေလဲ…ဟင်…။
ဒီတစ်ခါ ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ အဖြေကိုကြားပြီးကတည်းက ကောင်မလေးဟာ
ကောင်လေးကို မောင်…အဲဒီငှက်ကလေးတွေက ဘာငှက်လေးတွေလဲ…ဟင်…လို့ တစ်သက်လုံး
ကြားဖူးတဲ့ ဟာသလေး ပြန်ပြောပြတာပါ ၀ိုင်းစုရေ…။
အခုအချိန်တော့ အချစ်ငှက်ကလေးတွေ ပေါ့ကွယ်…။
မြင်မြင်သမျှ အချစ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ အချစ်ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကြီးပေါ့…။
မကြာခင် စင်ယော်…စင်ယော် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…။
စိတ်ကုန်စ ပြုလာတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ သဘောဗျ…။
နောက်ဆုံးတော့ နင့်မေလင်ငှက် နင့်မေလင်ငှက် ဖြစ်လာမှာဗျ…။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နဲ့ ကိုဥက္ကာတို့ အမြဲတမ်း အချစ်ငှက်ကလေးတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့
ဦးဘလက်နဲ့…မြန်မာဂဇက် ရွာသူရွာသားများက မင်္ဂလာဦးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ယောက်ျား ချည်း လွှတ်ယူနေကြတော့တာပါပဲ…ကွယ်…။
ယောက်ျားဆိုတာ ယူရုံနဲ့ မပြီးဘူးခင်ဗျ…။
တချို့မင်းသမီးတွေများ ကလေးအမေတွေ ဖြစ်လို့…။
ပြစ်မှားလက်စရှိနေတတ်တဲ့ မင်းသမီးတွေ အဆိုတော်တွေတွေ့ရင်…
မပြစ်မှားမိအောင် သတိပြန်ထားနေရတာကိုက အလုပ်ကြီးတစ်ခုဗျ…။
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းတစ်ယောက် ကိုဘုဏ်းသိုက်လေးနဲ့ ယူသွားတာ ဘာကြာသေးလို့လဲ…။
အမေရိကားမှာတောင် မီးဖွားဖြစ်မလားမသိဘူး ဆိုပဲ…။
ဒီနေ့ သစ်ထူးလွင် က သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ
Britney Spears ရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေး ဖတ်လိုက်ရပါသဗျ…။
အဲဒီ့အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရတာမိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ဘူး”
ဘလက်ကြီးတို့ မြန်မာပြည်က မင်းသမီးတွေ အဆိုကျော်တွေ…
အဲဒီလို ပွင့်လင်းတဲ့ ခေတ်ရောက်လာလိမ့်ဦးမှာလား…
တောင့်တယ်…၊ ဖြောင့်တယ်…၊ မို့တယ်…၊ မောက်တယ်…၊
၀င်းတယ်…၊ မွတ်တယ်…၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှပိုင်ရှင်…။
Sexy ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အစ်ကိုကာလသားတွေရဲ့
အိပ်မက်တွေကို စိုးမိုးပိုင်သလေသော မော်ဒယ်မလေး မရွှေစင် တစ်ယောက်
အတွယ်ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေးကလည်း
ရွှေစင်လေးကို တွယ်သွားတဲ့ တရားခံရောမိလိုက်ရဲ့လားကွ ဟေ…။
တရားခံက သွေးစုတ်တတ်တဲ့ ကျွတ်ကလေး တစ်ကောင်ပါ ကိုကို…။
ကွယ် မထိတ်သာ မလန့်သာ…။
တော်တော် အနေအစား မတတ်တဲ့ ကျွတ်…။
ထုံးစံအတိုင်း မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် ကျောင်းဒကာတို့…။
ကဲ…ခင်ဗျားတို့ ကျွတ်ဖြစ်လို့ တွယ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်…
မော်ဒယ်မလေး မရွှေစင်ရဲ့ ဘယ် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို
တွယ်တော့ တွယ်ချင်ပါတယ် တဲ့…။
ကျွတ်တော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး တဲ့…ဟေးဟေး…။
စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ဖို့ မြေကွက်ဝယ်ပေးတယ်လို့ ပြောရမလား…။
အိပ်မက်ဆုံရာရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေ သီဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့…
တေးစီးရီး နှစ်ခု ထွက် လာပါသတဲ့…။
အိပ်မက်ဆုံရာရဲ့ Season2အဆိုရှင် ၇ ယောက် သီဆိုထားတာပါ…။
တေးသီငှက်တို့ ဒဏ္ဍာရီ စီးရီးက
အိပ်မက်ဆုံရာ မောင်နှမ ၃ ယောက် သီဆိုထားတာပါ…။
အိပ်မက်ဆုံရာ မောင်နှမတွေသီဆိုထားတဲ့ တေးစီးရီးတွေကို
၀ယ်ယူနားဆင် နိုင်ကြပါပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း…၊
မြေတောင်မြှောက်တဲ့အနေနဲ့ သတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ကျောင်းဒကာတို့…။
သူမကို တချို့က မြန်မာပြည်ရဲ့ လေဒီဂါဂါ တဲ့…။
တချို့က သူမကို အရူးအမူး ကြိုက်ကြ…အားပေးကြ…။
တချို့က သူမဘာလုပ်လုပ် မျက်စိ စပါးမွှေး စူးကြ…။ ဝေဖန်ရှုတ်ချကြ…။
သူမကတော့ ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ (လွန်ကဲတဲ့ ဘက်တောင် နည်းနည်းရောက်နေသေးလားမသိ)
အသစ်အဆန်းတွေ တည်ထွင်ကြံဆ နေဆဲ…။
ဆရာဝန် အဆိုတော် ဒေါက်တာ ဖြူဖြူကျော်သိန်းပေါ့…။
ဘယ်သူ…ကိုယ့်လောက်ချစ်သလဲ ဆိုပြီး တဖွဖွ မေးတတ်သူကြီးပေါ့…။
အဲဒီ ဒေါက်တာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကြီးက
Channel7ရဲ့ လူကြိုက် များတဲ့…အိပ်မက်ဆုံရာ အစီအစဉ်မှာ…
ဒိုင် လုပ်ခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဒကာ…။
အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဒိုင်လုပ်တာ ဘာများဆန်းကြယ်နေပါသလဲ…။
အဲဒီ ဒိုင်လူကြီး ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရဲ့ ခေါင်းမှာ ပြင်ဆင်ထုံးဖွဲ့ခဲ့တဲ့
ဆံပင်ပုံစံက ထုံးစံအတိုင်း ဆန်းကြယ်ခဲ့တယ် ပေါ့ဗျာ…။
လူပြောသူပြော သိတ်…သိတ်…များခဲ့တယ်ရယ်လို့ ဘလက်ကြီးတို့ရဲ့
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်ထဲ သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါတယ်…။
ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချ သူတွေလည်း ရှိကြတယ် ဆိုလား…။
ဘလက်ကြီးကတော့ ခေါင်းမှာ ဂြိုလ် ပေါက်တဲ့ စတိုင်နဲ့…
အမေ နံကရိုင်း ပုံစံ ဆံပင်ဖက်ရှင် ထွင်ပြခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကြီးရဲ့…
လုပ်ရဲ…ထွင်ရဲ…တဲ့ သတ္တိကိုတော့ ဖြင့် မလေးစားပဲ မနေနိုင်ဘူးဆိုလား…။
အဲဒီ Channel7ရဲ့ အိပ်မက်ဆုံရာ အစီအစဉ်မှာတဲ့…
(အိပ်မက်ဆုံရာ ကြီးက သိတ်သိတ် ရေပန်းစားလွန်းနေတာပဲ…နော့်…)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူလလက်ဟောင်း မခိုင်ကြီး (ထွန်းအိန္ဒြာဗို) တစ်ယောက်
အကဲဖြတ်ဒိုင် လုပ်ဦးမယ်တဲ့ ကျောင်းဒကာကြီးတို့ရေ…။
ဘယ်လိုဖက်ရှင်အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပွဲတက် ပွဲထွက်လာဦးမယ် မသိ…။
မခိုင်ကြီးတို့က အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီး အဆိုတော်ဆိုတော့…
အသာလုပ်ပါ မခိုင်ကြီးရာ လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့…။
အဲဒီ ကလေးမလေးကို တရုတ်မလေး ဆိုပြီး…
ခင်ဗျားတို့ အမုန်းစကားတွေ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်…။ (ရက်စက်စိမ်းကားတဲ့ လေသံတွေနဲ့ပေါ့…။)
အဲဒီ ကလေးမလေးကိုပဲ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
မြန်မာကိုယ်စားပြုတဲ့ မြန်မာမလေးအဖြစ် ခင်ဗျားတို့ ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြဖူးပါတယ်…။
အရေးကြီးတာက အရေးကြီးတာပဲပေါ့ ကျောင်းဒကာတို့ရယ်…။
အဲဒီ…မိုးစက်ဝိုင်…ဆိုတဲ့…တရုတ်မလေးက (တရုတ်မပဲ ထားလိုက်ပါတော့ကွယ်…)
အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီလောက်သာ အရည်အချင်းရှိမယ် ဆိုရင်…
ကလေးတွေ အများကြီး မွေးစားချင် ပါတယ် တဲ့…။
ရည်ရွယ်ချက် သိတ်ကြီးတယ်နော် ကျောင်းဒကာ…။
အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ကြီး ပြည့်ဝဖို့ ဘလက်ကြီးက အကူအညီတွေ ပေးချင်လို့တဲ့…။
သူများကလေးတွေ မွေးစားဖို့ ဘာလို့ စိတ်ကူးနေမလဲ…မိုးစက်လေးရယ်…။
ကိုယ်ပိုင်ကလေးတွေမွေးဖို့ ဦးဘလက်ကြီးကို အား…ကိုး…လိုက်…စမ်း…ပါ…။
ဆုရွှန်းလဲ့ တစ်ယောက်လည်း စင်္ကာပူမှာနေသူတစ်ယောက်နဲ့…
အဲဒီလို ဆုရွှန်းလဲ့တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…
နံနက်ခင်းဂျာနယ်က ရုပ်ရှင်မင်းသား လူပျိုကြီး ဝေဠုကျော်ကို အင်တာဗျူးပါတယ်တဲ့…။
ကောင်းပါတယ်၊ အစစအဆင်ပြေစွာနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့၊
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အင်အားရှိသူတိုင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ရသူတိုင်းအတွက်
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဂဇက်ကလည်း
ဆုရွှန်းလဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
ကဲ…ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲက ဗန်းကိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်…သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ခင်ဗျ…။
မကြာခင် ကျင်းပတော့မယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးမှာ ဗန်း ကိုင်လိုသူတွေအနေနဲ့
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါသတဲ့…။
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ရှိတဲ့ အကယ်ဒမီ ဗန်းကိုင်ကော်မတီ ထံ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်…။
ဗန်းကိုင် ကော်မတီတဲ့ လားကွယ်…။
ဘလက်ကြီးတို့ကတော့ ခွက်ကိုင်ကော်မတီပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်…။
တော် ကြာ ခွက်ဆွဲတောင်းခိုင်းနေမှ အခက်…။
Junction Square မှာ SEA Games လှုံ့ဆော်ရေးပွဲ ကျင်းပသွားခဲ့ပါရောလားဗျာ…။
ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကျော် အဆိုတော် MOS နဲ့ PeeMak မင်းသမီးလေး တို့လည်း…
မြန်မာအနုပညာရှင်တွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းပြီး ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါသတဲ့…။
ထုံးစံအတိုင်း Miss Universe Myanmar မိုးစက်ဝိုင်လည်း ပွဲတက်ခဲ့တယ်ပေါ့…။
လူရှေ့သူရှေ့မှာ ယိုးဒယားကောင်လေး MOS က
မြန်မာမလေး မိုးစက်ဝိုင်ရှေ့ ဒူးထောက်လို့ ပန်းစည်းပေးသတဲ့…။
ဒီယိုးဒယားလေး လက်ကလည်း ခပ်သွက်သွက် ရှိပုံပေါ်ရဲ့…။
မိုးစက်ဝိုင် ရဲ့ ခါးလေးကိုလည်း အသာအယာဖက် ခဲ့ သေးသတဲ့…။
““မိုးစက်က အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ အခုလိုတွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်။
ဒီပန်းလေးကို သေချာလေး သိမ်းပေးထားပါ။ နောက်တစ်ခါလာရင် ဒီပန်းလေးကို ပြန်လိုချင်ပါတယ်””
ယိုးဒယားလေး လက်သွက်ခြေသွက် နှုတ်သွက် ဖြစ်နေချိန်မှာ…
ကျုပ်တို့စိုင်းစိုင်းကြီးက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့…PeeMak မင်းသမီးလေးကို စိုက်ကြည့်လို့ တဲ့…။
အင်း…စိုင်းစိုင်း ပြုံးရင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်တဲ့…။
ခိုင်ဇာကြီးပြောတာ ကြားဖူးတာပဲ ဗျာ…။
ယိုးဒယားထီးလေး နဲ့ မြန်မာမလေး…။
မြန်မာလေး စိုင်းစိုင်းနဲ့ ယိုးဒယားမလေး…။
ဟေးဟေး…။ စနေနေ့ ယိုးဒယားနဲ့ မြန်မာ ဘောပွဲရှိသတဲ့…။
သင်္ချာ နဲ့ နန်းစု လူဂျင်းလဲပေးဘာာာာ…
@ ဂီဂီ ;
ပထမဆုံး ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ…။
နန်းဆုလေး လည်း မဆိုးလှပါဘူး…ဟ…။
သူတို့အရွယ်တန်းမှာတော့ သူလေးက ဆိုးရှာပါဘူး ကွယ်…။
ခင်ညား ဟာ တွေ က (သီတင်းတွေ ပြောပါတယ်)
နား စွန် နား ဖျား မို့ သာ တော်တော့။
ကိုနို တို့တော့ မနိုင်ဘူးးး
ဒါနဲ့ နားထဲ ကျွတ်တွယ်တယ် ဆိုရအောင် ဘယ်နား ဘာသွားလုပ်သတုန်းးးးး
စိုင်း အပြုံး ကို ချစ်စာကောင်းတယ် ပဲ ပြောဖူးပါတယ်အေ။
အဲဒီ ယိုးဒယား မင်းသမီးနဲ့များဆို ပြုံးရုံမက ဖြီးလို့။
နာ လည်း သရဲ ကားရိုက်ရင် သူ့ထက်အောင်မြင်ပါတယ် ဟေးဟေးဟေးးးးး
အတော် ဖတ်ကောင်းလို့ ကျေးဇူးပါ..
ဖတ် သွားးးး ပါ တယ်
ဒါနဲ့ စဂါးးးးးးးးဆက်ချင်တာ ဟီးးးးးးး
ကယ် ဒမီ ဗန်းးးးးးးကိုင် လုပ် ဂျင် လို့ ဘာာာ လျောက် လွှာ တင် မ ရို့့ 
@ မင်း ခန့် ကျော် ;
ဗန်း ကိုင်လုပ်ချင်ရင် ဗန်းကိုင်ကော်မတီ ဆိုတာရှိသတဲ့…။
လူတွေ ယုံထင် ကြောင်ထင် ထင်နေကြပါဦးမယ်…။
ကျောင်းဒဂါကြီးကို တစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပုဘာ …
ဟို .. ဇင်ယော်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ ..
အခုအချိန်မှာများ ကျောင်းဒဂါကြီးကို မေးလာခဲ့ယင် ..
ဘယ်လို ဖြေမလဲဆိုတာ သိဘာရစေ ခည …
အင်း…ကိုကို အံစာကြီးက ကွက်ရှင် ရှုတယ်ပေါ့လေ…။
အဲဒါ…လူကြားထဲမှာ ဖြေရမယ့်ပုစ္ဆာမျိုး မဟုတ်ဘူး ကိုကိုရဲ့…။
ဆြာဘလက်ရဲ့ နားစွန်နားဖျားက ကျောက်စ်တို့လို…
ဟိုသတင်း ဒီသတင်းငတ်သူအဖို့ တန်ကျေးရှိပါတယ်ဗျ…
ကင်(မ်)ခါဒါရှန်း က တစ်ထောင်ပေးပြီး ပါးချတဲ့ မင်းသမီးရဲ့နောက်မှာ ခင်ည…
ခီလေးမွေးတော့ ဘန်ကောက် ယန်ဟီးဆေးရုံမှာမွေးပြီး…
အလှပြင်လာသတဲ့… မညှီပါဘူး… မျက်နှာကိုပြောတာပါ… ဟီး ဟီး
အဲလို အလှပြင်တာကို ဘန်းစကားနဲ့ ဘာခေါ်တုန်း သိလားးး
တားတားက ငယ်သေးတော့… တိဝူးလေ…
ဒါပေသည့် အဲသည့်သတင်းက အမှန်ပါ…
မှန်ဆို အဲ့ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်ဘော်ဒါရှိတယ်…
နောက်ပြီး သင်္ချာကြီးတို့ Lsz ကလေးတို့လည်း…
အဲ့မှာ ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်သွားကြသတဲ့… ဟီ ဟိ
ဂယ်ပါဗျာ… ဒါမျိုးဆို တည့်တည့်တိုးလွန်းလို့…
ဟိုမင်းသမီး ခလေးမွေးပြီး ဆြာဂီပြောတာ လုပ်တုန်းက…
ကျောက်စ် အဲ့ဆေးရုံက ဘော်ဘော်ဆီ ရောက်နေတာ…
ဘယ်မင်းသမီး ဘာလုပ်ထားတယ် ဆိုတာ သိပါ၏… ဟိ
သင်္ချာကြီးတို့ Lsz ကလေးတို့ရဲ့ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ တဲ့လား…။
အဲဒီအကြောင်းပို့စ် တင်ပြီး ရှင်းပြပေးပါ ကိုကျောက်…။
နားစွန်နားဖျားတွေပဲ ဖတ်သွားပါတယ် ဘဘ ဘလက်ရေ
တစ်ဗိုလ်တက် တစ်ဗိုလ်ဆင်း စနစ်နဲ့
ဆက်လက် ဆက်လက် ချီတက်ဆဲ ပါလား……
ဖတ်သွားတာ ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ ကိုမာဃရယ်…။
ယူအက်စ်မှာကလေးမွေးရင်.. အဲဒီကလေး.. ချွင်းချက်မရှိ..အမေရိကန်တန်းဖြစ်သဗျ…။
ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက ..ဆေးရုံကိုလူလွှတ်ပြီး.. ဆိုရှယ်နံပါတ်..ဘာညာတွေအကုန်လုပ်ပေးတဲ့အပြင်.. လိုအပ်တာတွေအကုန်ဖရီးပေးသဗျ…။
ချမ်းချမ်း..ဗိုက်ကြီးနဲ့လေယဉ်ပေါ်တက်.. ယူအက်စ်မှာ ကလေးမွေးဖို့.. သံရုံးကဗီဇာပေးမပေးမသေချာ..
အတွင်းစကား..သတင်းကြားတာကတော့.. ယူအက်စ်လာရမဲ့.. မေမှာ.. ကလေးကအပြင်လောကရောက်နေပြီး…ဖြစ်မှာပါတဲ့..။
Adwww.beautifulandhealthy.com/‎1 (855) 989 8446
Beverly Hills Board Certified GYN Web Special: $2,500+anesthesia fee
Adwww.drgorodisky.com/‎1 (805) 918 4549
Vaginal Rejuvenation From Local Board Certified Plastic Surgeon.
Face Lift – Neck Lift – Tummy Tuck – Contact Us
Vaginal Surgery Expert,LA – Experienced Female Gynecologist‎
Boutique Practice in Beverly Hills
ကိုရင်ဘလက်ချော နားရင်းပါးရင်း( နားစွန်းနားဖျား -ပြောင်းပြန်) ကို.. အဲဒါလေးနဲ့ အားဖြည့်လိုက်ကြောင်း….။
Rejuvenation ဆိုပါ့လား …
အဲ့လိုယီး တစ်တစ်ခွခွ သုံးတယ်လား..
အောင်မငီး ..ပူလာပြီ နားထင်နားရင်းတွေ
ချမ်းချမ်းသည်လည်း သူကြီး ပယောဂနဲ့ အမေရိကားရောက်ဦးမယ့်သဘောပေါ့…။
Vaginal Rejuvenation‎ အတွက် ဗဟုသုတပေးသွားလို့ ကျေးဇူး…။
တရုပ်မတွေယူအက်ကို ဗိုက်လုံးမပေါ်ခင် အရောက်သွားပြီး
သေချာတာကတော့ အဲဒီမှာ ကလေးသွားမွေးရင်
မြန်မာပြည်မှာ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မရှိ
မြန်မာလူမျိုး.. တိုင်းရင်းသား၂ယောက်က.. ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးမွေး.. မြန်မာဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်..။
ဒါက.. မြန်မာ့လ၀ကဥပဒေထဲ.. ပါကိုပါရမယ်..။
ယူအက်စ်မြေမှာမွေးတဲ့ကလေး.. အမေရိကန်(အလိုအလျှောက်) တန်းသာဖြစ်နေတာ.. အဲဒီကလေးရဲ့.. သဘောတူခွင့်ပြုချက်မပါသေးတာမို့.. ယူအက်စ်ဥပဒေအရ.. သူအသက်ပြည့်မှ.. (၁၈လား…၂၀လားရောက်မှ.. )သူကိုယ်တိုင်က..ဘယ်နိုင်ငံသားခံယူချင်တယ်အပေါ်မူတည်ပြီး.. တရားဝင်… ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်..
ဥပဒေဆိုတာ… လူကလုပ်တာဖြစ်ပြီး.. လူတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပါ…
မနေ့က သတင်းစာထဲ ယင်းလပ်ပုံတွေ့တော့ ဦးဘလက်ကြီး ကြေကွဲနေလောက်ပြီးထင်တာ.. အခုတော့ ဖြေဆေးတွေများတော့ ယင်းလပ်ကိုမေ့နေပြီပေါ့.. :mrgreenn:
အော်…သမီးလေး ကိုမြင်တိုင်း ခရစ္စတီးနားကို ပြေးပြေးသတိရမိတယ်ဗျ…။
ယင်လတ် ရဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သမီးလည်း သိပြီးရောပေါ့…။
လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ ယင်လတ်ကို ထည့် မနောက်တော့တဲ့ သဘောပါဗျာ…။
ယင်လတ် ကြီးနဲ့ တွဲပြီးတော့ မှတ်မိနေတယ် ဆိုတော့…
လေကြီးမိုးကြီး ၀ုန်းဒိုင်း ပို့စ် ကို ဖတ်ထားတာ ဖြစ်ရမယ်ဗျ…။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါဗျာ…။
ဒါပေမဲ့ပေါ့ သူကြီးရယ် ဟီးးးး
ပြီး မြန်ပြည်ပြန်လာပြီး NLD ပါတီ သို့ ပါတီထောင်မည်။
သမ္မတ လုပ်ဖို့ အရိပ်အရောင် ပြလာရင်
ဥပဒေသည် လူကလုပ်တာမို့ လုပ်သူများအဆင်ပြေအောင်
ချမ်းချမ်း ညည်းနဲ့ မဆိုင်ဘူးနော် စဂါးအဖြစ်ပြောတာ
ချမ်းချမ်းကလေးက.. အသက်၁၈အရောက်မှာ.. ကမ္ဘာတန်းအဆင့်.. ဥပမာ..။ သီချင်းအော်ဆိုလိုက်ရင်.. ရှေ့၁၀ပေကမှန်ကွဲထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့…။
ယူအက်စ်သံရုံးက.. ပုဂ္ဂိုလ်တွေ.. အဲဒီအိမ်ရှေ့သွားစောင့်ပြီး… အမေရိကားသွားဖို့.. ပါတ်စ်ပို့အတင်းထုတ်ပေး.. အမေရိကန်ဖြစ်ကြောင်း…အတင်းပြော.. လုပ်ကြမှာဗျ..
ကိုရင့်ပို့စ်ထဲ.. အာလာရိုက်နေတာ… စောတီး…
ပြန်တည့်သွားအောင်.. ပြောရရင်.. ယူအက်စ်လာဖြစ်ကြရင်.. ဖြူုဖြူကျော်သိန်းနဲ့..ချမ်းချမ်း.. ထွန်အိဒြာင်္ဗိုလ် တူတူလာကြမှာဖြစ်ပါကြောင်း..
ဦးဘက်ကြီးလဲ ဂျေလိုကို ကြိုက် တော့ ဂျေလိုလို. တင်ပါးကြီးကော့ပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက် ရိုက်တင်ပါလားဟင်…
ဘယ်တုန်းက လိင်တူ ခြင်း စိတ်ဝင်စားမှု ကို အစပြုခဲ့တာလဲကွယ်…။
ဦးဘလက် တင်ပါးကြီးကို တော့ မပြစ်မှားချင်ပါနဲ့ ကိုကိုရယ်…။
ဆက်စီတွေ ပဲဆီတွေ လည်း မကျပါရစေနဲ့ ကွယ်…။
ဘာမှပြန်မပြောပေမယ့်လဲ အချိန်ရတိုင်း ဘဘဘလက်ရော… ရိုးရိုးဘလက်ရော… ဒါဘယ်ဘလက်ရောကို
သူကြီးကူးမပြခင်… ယူနိုက်တက်စတိတ်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ ပြင်ခွင့်မရှိတဲ့ဟာ (၂)ခုကို
The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution protects the right of individual Americans to keep and bear arms regardless of service inamilitia. The right is not unlimited and does not prohibit all regulation of firearms and similar devices. State and local governments are limited to the same extent as the federal government from infringing this right. The Second Amendment was adopted on December 15, 1791, as part of the first ten amendments comprising the Bill of Rights.
@ ကြောင်ဝတုတ် ;
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အခြေခံဥပဒေ အကြောင်း…
ဗိုလ်လို တော့ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
ကျည်ဆံတွေ၊ ယမ်းတွေ လိုက်ကောက်
လက်နက်ဆိုတာလည်း လုပ်တတ်မှ ရသနော့……
အစအနတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်လက်နက်ပညာရှင်ကို ကျေးကျေးပါ…
၀ါဆိုမိုးဦး တင်ပါး ဆိုတာကျတော့
@ marblecommet ;
၀ါဆိုမိုးဦးတင်ပါး ကြီးတွေ အကြောင်းက ပို့စ်တင်မလို့ ရေးထားတာ
တောင်တန်းနှင့်တူသော ၀ါဆိုမိုးဦး တင်ပါးကြီးများ အကြောင်းတဲ့…။
ကဗျာဆရာကမ်းဝေး နှင့် တောင်တန်းနှင့်တူသောဝါဆိုမိုးဦးတင်ပါးကြီးများ ဆိုလည်း
မြင့်မိုရ် မို့လား ကွယ်…။
ဒီတောင်ကို မောင်ဖြိုမယ် ..မြင့်မိုရ်မို့လား…အဲ့လို ညှီတယ်ပေါ့လေ… အလို….လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်တတ်သူကြီး ငဲ့….
နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်က တစ်နေ့တခြား ပွင့်လင်းလာပါလား
လူချင်းတွေ့၊ ခွက်ချင်းတေ့ပီးမှ ပြောကောင်းမှာတွေမို့..ရင်ထဲမှာချန်ထားလိုက်ပါဂျောင်းးး
ခွက်ပြိုင်တွေဆိုတော့ ခွက်ချင်းတွေ့မှ ပြောချင်တာ မဆန်း…..
ဟေးးးး ဟေးးးး (ခွက်ဒစ်တူ နားစွန်နားဖျား)
နားစွန်နားဖျားဖတ်ပြီး အသံထွက်သွားတာ။ “:loll:
ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးသွားတာလည်း ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ…။
အားရပါးရကြီးကို ဖတ်လိုက်ရတယ် ။
လေးဘလက် ရဲ့ တင်သမျှစာတွေကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေတဲ့ မန်ဘာဝင်မဟုတ်သူ မမကြီးတစ်ယောက် ရှိတယ်နော်
လေးလေး စာတွေ မတွေ့ တာကြာရင် တမေးထဲမေးးးအဲ ကြုံတိုင်းမေးနေတတ်တာရယ်
အိပ်မက်ဆုံရာမှာ ဖြူဖြူ ဒိုင် လုပ်တာ ဂွတ်တယ်။
ဖြူဖြူ့ ကို ချစ်တယ်
အားရပါးရကြီး ဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
စိတ်က သိတ်ခိုင်လှတာ ဟုတ်ဘူးရယ်…။
ကိုချော ခင်ဗျာက လုပ်လိုက်ရင်တော့ လေ
မရေး မရေး နဲ့ ရေးတော့လဲ ဒီ အညှီ အဟောက်တွေ ချည်းပဲ
မဖတ်ချင်လို့ မရေးပါနဲ့ ဆို မေတ္တာရပ်ခံတာ မရဘူး
ခင်ဗျာက ရေးတော့ ဖတ်မိရော
အပတ်တိုင်း မှန်မှန် ရေးမယ် လို့ အာမ မခံနိုင်ရင်
ဒီ လို အညှီအဟောက်မျိုး လုံးဝ မရေးပါနဲ့
( အီးမေးနဲ့ သာ ပို့လိုက်ပါ )
အဲလို အလှပြင်တာကို ဘန်းစကားနဲ့ ဘာခေါ်တုန်း သိလားးး လို့ တန်းလန်းကြီး မလုပ်ထားနဲ့ လေ
ဒေါ်ဆွိ ရဲ့ သိရင် ပြောပါဦး
အုံမာဒါနီ အော်ပရေးရှင်း ခေါ်သလားလို့. …
ဟုတ်ရား… အဂုမှသိတယ်… ဟီဟိ
ဂဇက်ထဲမှာ ဆြာ့ ဆြာတွေချည်းပဲ…
ကို နို မေးလို့ ဆက်ဖြေပေးမို့ဟာကို ဒီ ကိုတတ်ပ က ဖြေသကိုးးးး
မောင်ဂီ ညည်း မလွယ်ဘူးးး
အဲဒါ ဆရာဝန်တွေ စ တဲ့ ဘန်းစကားးးး
ဒေါ်ဆွိကို ဘာတွေ မေးနေရပြန်တာတုန်းဗျာ…။
အလှပြင်နည်းက နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိပါတယ်တဲ့…။
ဥမ္မာဒန္တီ က ချုပ်ရိုးပျောက်ပါတဲ့…။
နောက်တမျိုးကို ခေါ်တာလဲ ရှိသေးတယ်…တဲ့။
ဆရာ့ ဆရာ တွေ ထပ်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်…။
အာပါး… ဆြာတွေ ထပ်ထွက်လာပြီ…
ကျောက်စ်ကတော့ ဘာဆို ဘာမှမသိ… ဟီ ဟိ
@ twitty ;
နားရှက်စရာ စကားတွေ သိတ်ပြောကြတာပဲ…
အဟမ်းးးးးးးးး ..
အဲ့ဒါ ..ဘာလုပ်​ရတာလဲခင်​ဗျ .. ​ဟေး​ဟေး ..
ဒါနဲ့… ဘဘ ဘလက်​ကို​တောင်​ဆိုပါရ​စေ..
​ရောဂါလဲ သက်​သာ​အောင်​ ဒီလိုမျိုးသတင်း​လေးများ
မကြာခဏ​ရေးပြီး လက်​တို့ပါ.. လို့ …
သတင်းစုံတဲ့ လမ်းဆုံက ဘဘ ဘလက်​ကိုလည်း​ကျေး​ကျေးပါ လို့ …
စကိုင်းနက်​ ကိုစိတ်​နာလို့ ဖိုက်​မူဗွီပြန်​တပ်​​နေရလို့ပါ လို့…
ခွင့်မတောင်းပဲ နာမည်ထည့်နောက်တာကို စိတ်မဆိုးတာအတွက်ရော…
အနော်ယဲ စကိုင်းနက်မှာ Shwe FM ၄နှစ်ပြည့်း ရှိုးပွဲမှာ ဝါဆိုမိုးဦး ပါဖောမင့်ကို ကြည့်ပြီး အနော်တို့တောင် ဟိုက်ရှားဘားကို ဖစ်ယို့
ဖတ်လိုက်ရတာ နားစွန်နားဖျားတွေမို့သာပဲ ဒီတေးသာဆိုရင်တော့ တစ်ထောင့်တစ်ညဖြစ်လောက်တယ်။
အဲ့ဥပဒေကြီးတွေကိုတော့ မကြိုက်တာအမှန်ပဲ ကြောက်တယ်။
မြန်မာကားမကြည့်ဖြစ်တာ၇နှစ်လောက်ရှိနေပေမယ့် ဖွဘုတ်အားကိုးနဲ့မင်းသားမင်းသမီးအသစ်တွေအကြောင်းကိုတော့ သိသိနေရပါတယ်
ပြောရရင်..ဒီနေ့(၁၂။၁၄။၁၃)က.. Newtown Sandy Hook Elementary မှာကလေးတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခံရတာရဲ့.. နှစ်လည်နေ့ပဲ..
Remembering the Sandy Hook Elementary victims – CNN.com
A gunman opened fire inaConnecticut elementary school on December 14, killing 26 people — 20 of them children — according to law enforcement officials.
သေနတ်ကိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်ကို.. အဲဒါလူသတ်ပွဲပြီးတော့.. တော်တော်လေး.. ပြန်စိစစ်ကြတာတော့အမှန်..
သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကိုထိမ်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့.. လွှတ်တော်အမတ်တွေခမြာ.. ပြီးခဲ့တဲ့.. နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ပြုတ်ကုန်ပါရောလား..
The First Amendment (Amendment I) ဆိုတာ.. အခြေခံဥပဒေကို.. ပြင်ဆင်ချက်ထုတ်ထားတာ လို့.. သဘောပေါက်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပါ..။
အခြေခံမကလို့.. အခြေခံ့ဘိုးအေဖြစ်ဖြစ်.. ဥပဒေကိုလူကလုပ်တာမို့.. လူတွေအတွက်ဥပဒေက..ညှိနှိုင်း ပြင်ခွင့်ရှိကိုရှိရပါမယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ.. ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်.. မထုတ်သင့်ဘူးလား..
ထုတ်သင့်တယ်..။ ထုတ်သင့်တယ်..။ (အကြိမ် ၂သိန်း)
မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်…
(အကြိမ် ၂ သိန်း လောက် ဘယ်ရလိမ့်မလဲ သူကြီးရယ်…။)
အကြိမ်ပေါင်း သန်း ၆၀။
ဒီရွာထဲ ဒီရပ်ကွက်က အစည်ဆုံးပါကလား ကိုချောရဲ့ …
ဒီစကားဝိုင်းမှာတော့ ၀င်ပြောတတ်တာ ဘာမှမရှိလို့
အညှီ ရှိရာ ယင် အုံ တဲ့ သဘောပါဗျာ…။
မန်းလေးဂဇက်ကို မတက်တာကြာပြီ ပို့စ် တင်သူတွေကို အလေးနီ ပြုပါတယ် ကိုဘလက်ချောဟာ မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းစကားနဲ့ ပြောရရင် ခြောက်လုံးပတ် တီးနေသူလိုပါလား ဘယ်ဗုံမှ မလွတ်ဖူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုသူလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ တွေ့ရင် လက်တို့နော် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးတွေ လက်ဆောင်ပေးနေချင်လို့ပါ။
@ kokothandar ;
တော်တော် ကြီးကို နောက်ကျသွားပါတယ်ဗျာ…။
ကျေးဇူး အထူးပါ ကိုကိုသန္တာ ခင်ဗျာ…။
ဟဟား အူးဘလက်တို့ဝိုင်း အရင်အတိုင်းလူစည်မျဲဘဲ